बाल दिवसमा दामोदरको कोसेलीः 'ट्यालेन्ट शो' - Jhapa Online
महत्वपूर्ण सम्पर्क नम्बर
Popular News Portal of Jhapa
कांग्रेस सभापति उद्धव थापाको गाडीमा बम विष्फोट
ओली निवास दमकमा बम, यसरी गरियो डिष्पोज (हेर्नुस् भिडियो)
झापामा निर्वाचनका वेला ५ हजार ५ सय कर्मचारी खटाइने
बिप्लपको कनकाई नगर जनसरकार प्रमुख देवी प्रसार्इंसहित ३ पक्राउ
विश्वप्रकाशको प्रस्तावः वाम होइन, आम गठबन्धन गरौं
पशुपति आर्यघाटमा प्रकाश दाहालको यसरी गरियो अन्त्येष्टी (भिडियोसहित)
शीर्ष खबर • साहित्य
बाल दिवसमा दामोदरको कोसेलीः ‘ट्यालेन्ट शो’
काठमाडौं । बालबालिकामा केन्द्रित पुस्तक कर्म ः सिकाइमा गहिरिएको खाडल पुस्तक ल्याएर बालबालिका सम्बन्धि विषयमा बहस चलाउन सफल लेखक दामोदर न्यौपानेको तेस्रो कृति ट्यालेन्ट शो सार्वजनिक भएको छ ।
कान्तिपुर दैनिकका पत्रकार तथा लेखक दामोदर न्यौपानेले बालचित्रकथा ट्यालेन्ट शो बालबालिकाले विमोचन गरे ।
अक्षरका स्कुलका कक्षा ८ का छात्रा श्रीतिका तिमल्सिना, कक्षा ७ का छात्र एलेक्स अधिकारी र एसओएस हर्मन माइनर स्कुल १२ कक्षाकी छात्र सुजिता न्यौपानेले सार्वजनिक गरे ।
पुस्तकमाथि टिप्पणी गर्दै श्रतिकाले कथाको विषयवस्तु आफूलाई मन परेको बताइन् ।
‘यसमा स्वाभिमान र सानु गरी दुई जना मुख्य पात्र छन्, ‘उनले टिप्पणी गरिन्, ‘शुरुमा सानी ट्यालेन्ट शोमा भाग लिन पाउछु भनेर खुशी भएकी हुन्छे । उसले परिवरालाई पनि ट्यालेन्ट शो हेर्न बोलाएकी हुन्छे । तर पछि उसलाई छान्दैनन् । कक्षामा अलि जान्नेलाई मात्रै अघि सार्छन् । त्यसले गर्दा सानी निराश हुन्छे । उसलाई मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर्छ । उ झन् राम्रोसँग पढ्न मान्दिन् । खाना पनि राम्रोसँग खान मान्दिन् । उसमा मनोवैज्ञानिक असर परेपछि सानीको सानुबाबाले यो कथा पत्रिका लेखिदिन्छन् । पत्रिकामा छापिएपछि यो कथाले चर्चा पाउ“छ । प्रिन्सिपलले बोलाएर अर्काे पटक भाग लिन दिने वचन दिन्छन् । अनि सानी खुशी हुन्छे । यसमा बालमनोविज्ञानलाई राम्रोगरी केलाइएको छ ।’
एलेक्सले पनि कथा आफूलाई निकै मन परेको बताए । ‘मेरो स्कुलमा जान्ने र नजान्नेबीच कुनै भेदभाव छैन,’ उनले टिप्पणी गरे तर अरु स्कुलमा यो समस्या रहेछ । अब यस्तो भेदभाव नगर्नु होला । सबैलाई समान अवसर दिनु होला ।’ बालसाहित्यकार तथा पत्रकार नेत्र तामाङले पहिलो कथा भएपनि शसक्त रहेको प्रतिक्रिया दिए ।
‘यो मेरै कथा जस्तो लाग्यो,’ तामाङले भने, ‘शिक्ष्ँकले साना साना कुरामा ध्यान नदिंदा बालबालिकाले मनोवैज्ञानिक असर व्यहोर्नु परेको छ । यो कथाले मेरो मन छोयो ।’
अर्का बालसाहित्यकार श्रीराम राइले आफ” पनि बालसाहित्य लेख्ने भएकाले न्यौपानेको कृति इष्र्यालाग्दो भएको प्रतिक्रिया दिए ।
‘विद्यालयमा जान्ने विद्यार्थीलाई मात्र प्राथमिकता दिइने जीवन्त समस्यालाई पुस्तकमा उठाइएको छ,’ राईले भने, ‘अरु विद्यार्थी प िनसवल हुन्छन् भन्ने देखाइएको छ । कथामा हुनु पर्ने सबै तत्व छन् । द्वन्द्व पनि शसक्त रुपमा देखाइएको छ ।’
लेखक न्यौपानेले बालबालिकालाई हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोण र व्यवहार गर्ने तरिका बदल्न’ पर्छ भन्ने अभियान अन्तरगत यो पुस्तक आएको् बताए । उनको यस अघि एमबुसमा ६ वर्ष र कर्म: सिकाइमा गहिरिएको खाडल सार्वजनिक भएका छन् ।
पुस्तक स्वदेश प्रकाशन प्रालिले बजारमा ल्याएको हो ।
दमकमा छोराको खुकुरी प्रहारबाट आमा घाइते
षडजलाई नसालु नजरले हेरेपछि यस्तो भयो (हेर्नुस् भिडियोसहित)
मध्यरातमा डुब्यो झापा, तस्वीरमा हेर्नुस् कहाँ के भयो ? (फोटो/भिडियो फिचर)
झापामा रोकियो वर्षा, नदीमा पानीको बहाव घटदै
शिवसताक्षीमा खोला गाउँ पस्यो, २१ घर डुबानमा
बाढीले झापामा त्रास, बिर्तामोडमा गाडी नै बगाउने पानी !
कनकाईका चर्चित कांग्रेस कार्यकर्ता कारबाहीमा, चुनावमा अन्तरघात गरेको आरोप
अन्तर्वार्ता • झापा अनलाइन विशेष
म कसैलाई प्रतिष्पर्धी ठान्दिनः राम कार्की (अन्तरवार्ता)
झापा अनलाइन झापा जिल्लाको लोकप्रिय अनलाइन पोर्टल हो । थप जानकारीका लागि info@jhapaonline.com मा सम्पर्क गर्नुहोस् ।
Copyright © 2017. Created by Jhapa Online.